China Cotton Plain Sleeve Girl T-Shirt PY-GTC001 fanamboarana sy orinasa | Pinyang
T-shirt tovovavy lava vita amin'ny landihazo
1. Inona avy ireo tombony azo amin'ny akanjo landihazo madio?
Satria ny fibre landihazo dia mpampita hafanana sy herinaratra maharatsy, tena ambany ny coefficient fitarihana hafanana azy, ary noho ny porosity sy ny elastika avo dia be dia be ny rivotra azo voangona eo anelanelan'ny fibre, ary ny rivotra kosa dia mpampita hafanana ratsy sy herinaratra. Noho izany, ny lamba rongony vita amin'ny landihazo madio dia misy insulateur thermale tsara, ary ny fanaovana akanjo landihazo madio dia mahatonga ny olona hahatsiaro ho mafana. 2 、 Ahoana no anaovana T-shirt?
Mivoaha: T-shirt + satroka feno molotra satria ny sela melanin amin'ny hoditry ny ankizy dia tsy matotra ary tsy mahazaka fanoherana ultraviolet, asaina manao T-shirt lava na akanjo lava lava rehefa mivoaka, izay tsy afaka misoroka fotsiny sunburn, fa miaro ny hoditra marefo ihany koa ny zaza.
May koa avelao ny zazakely hitafy satroka tsara azo zahana habakabaka malalaka, afaka milalao vokarin'ny masoandro tsara ihany koa, fa afaka misoroka hafanana koa.
2. Fitsangatsanganana an-tsaha: lobaka lava vita pataloha + pataloha
Amin'ny fahavaratra, raha te-hitondra ny zanany any an-tsaha ny ray aman-dreny, dia handany fotoana lava any ivelany izy ireo, ary mora ny filentehan'ny masoandro. Ankoatr'izay, ny moka, tsilo, bakteria sns dia mety hampidi-doza ny hoditr'izy ireo. Ka manaova pataloha lava lava ho an'ny ankizy, tsy vitan'ny alokaloka tsara, fa mba hialana amin'ny kaikitry ny moka, ratra amin'ny tsilo ary toe-javatra hafa.
Fampiasana vokatra: ho an'ny akanjo ana-tarika, fanaingoana manokana, sns., Afaka manamboatra loko, lamina, sary famantarana.
1.Q Ianao no orinasa?
A Eny, mpanamboatra akanjo ho an'ny ankizy matihanina izahay.
2.Q Manaiky baiko kely ve ianao?
A Eny, manaiky lamandy kely sy kaom-pitsarana izahay.
3. Q Azonao atao ve ny manonta ny sary famantarana anay?
Eny. Azontsika atao ny manonta ny mpanjifa.
4.Q Mandra-pahoviana ny fonosana halefa any amin'ny adiresy?
A Tokony ho 3-10 andro fiasana vao tonga ny adiresinao amin'ny alàlan'ny DHL, UPS, EMS, 4PX. Ary maharitra eo amin'ny 25-35 andro fiasana vao tonga ny adiresinao an-dranomasina.
5.QI te hanana fomba bebe kokoa, ahoana ny fomba ahazoako katalaogy farany hanovozan-kevitra?
A Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny Manager Manager na mailaka, homenay anao ny katalaoginay farany araka ny mombamomba anao.
6.Q Ahoana no hifehezana ny kalitao?
A Handamina fanamafisana ohatra izahay alohan'ny famokarana betsaka. Mandritra ny famokarana, manana mpiasa QC matihanina mifehy ny kalitao sy ny fanamboarana mifanaraka amin'ny santionany voamarina izahay. Izahay koa dia hanome antoka ny fahamarinan'ny fonosana ary handefa anao santionany fandefasana. Tongasoa eto amin'ny ozinay mba hijerena.
7. F Mifanaraka amin'ny tontolo iainana ve ny vokatrao? Azo antoka ve izany ho an'ny zazantsika?
A Eny, ny vokatrao dia mailaka ara-tontolo iainana, manana mari-pankasitrahana SGS. salama sy azo antoka ho an'ny zanakao.
Previous: T-Shirt zazalahy kely lava tanety Crew neck PY-TD001
Manaraka: T-Shirt zazavavy kely feno 8 taona PY-GD001
T-Shirt zazalahy lava lohataona sy lavo lava PY-TC002
T-Shirt zazavavy kely feno 8 taona PY-GD001
Fivarotana mafana T-Shirt Long Sleeve Boy PY-TC004
Volavola azo zahana lava T-Shirt zazalahy lava ...
T-Shirt zazalahy kely lava tanety Crew neck PY-TD001